Email template igosipụta nkwenye
Edere site Tranquillus | Nov 26, 2018 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Enwere ike ịkpọ gị òkù ịbịa mmemme ọkachamara, mana ị gaghị enwe ike ịga. N'okwu ndị a, ị ga-enwerịrị ike ịgwa onye zitere gị òkù ahụ, na-eme ka ọjụjụ gị jiri a email. Edemede a na-enye gị ndụmọdụ ụfọdụ maka ịde email jụrụ oku mmemme ọkachamara.
Mgbe ị nwetara akwụkwọ ịkpọ òkù, ị na-atụ anya na ị maara ma ọ bụrụ na ị nweere onwe gị n'ụbọchị ịza ee maọbụ ọ bụla na onye na-akpọ gị. N'ihe banyere ịjụ, akwụkwọ ozi gị ga-adị mma ịghara inye echiche na ị adịghị esonye n'ihi na ihe omume ahụ anaghị amasị gị.
Atụmatụ ụfọdụ iji gosi nkwenye site na email
Mbụ anyị n'ọnụ ide email jụrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na otú ziri ezi gị jụrụ enweghị bụchaghị na-aga n'ime nkọwa, kama iji na-egosi onye gị na gị jụrụ bụ ezi obi.
Malite email gị site na-ekele onye na-akpọ gị maka ịkpọ òkù. Wee gosi na ị jụrụ. N'ime ozi email ahụ, na-adị nwayọọ na akọ. N'ikpeazụ, rịọ mgbaghara ma hapụ ohere imeghe maka oge ọzọ (na-enweghị imebiga ihe ókè).
Nke a bụ email template iji gosipụta ọjụjụ ị jụrụ ịkpọ oku ọkachamara, site na ọmụmaatụ nke akwụkwọ ịkpọ oku maka nri ụtụtụ iji gosipụta atụmatụ ụlọ akwụkwọ:
Isiokwu: invitationbọchị nri ụtụtụ nke [ụbọchị].
Daalụ maka òkù ị kpọrọ òkù maka mmemme nri ụtụtụ na [ụbọchị]. N'ụzọ dị mwute, agaghị m enwe ike ịga n'ihi na m ga-ezute ndị ahịa na ụtụtụ ahụ. Enwere m mwute na apụghị m ịnọ ebe a n'ihi na m na-atụ anya nzukọ a kwa afọ ná mmalite afọ.
[Onye otu] nwere ike isonye na ọnọdụ m wee kọọrọ m ihe m kwuru n'oge nzukọ a na-ezighi ezi. M ga-anọnyere gị n'oge ọzọ!
Email template igosipụta nkwenye August 26th, 2020Tranquillus
GỤỌ Ndụmọdụ ise iji belata ahịrịokwu gị
gara agaỤdị Email maka ịkpọsa òkè gị na nzukọ
-esonụTemplate Email iji rịọ onye ọrụ ibe ya mgbaghara
Kedu otu esi emegharị ederede ọkachamara?
Mpempe akwụkwọ ozi iji kọọ mmejọ na ụgwọ ọnwa gị